कोरोनाको औषधि नेपालमै बनेको दाबी - Khabar24Nepal	Khabar24Nepal	कोरोनाको औषधि नेपालमै बनेको दाबी - Khabar24Nepal
भदौ १४, काठमाडौं । हाल कोरोनाले विश्व आतंकित भइरहेको बेला विभिन्न देसहरुले यो रोग निको पार्ने औषधिको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको समयमा नेपालमा पनि आयुर्वेदिक जडिबुटी अनुसन्धानकर्ता डा. बद्री गौतमले यो रोगको निधान गर्ने औषधि पत्ता लगाएको दावी गरेका छन । रुपन्देही, भैरहवा घर भएका डा. गौतम लामो समयदेखि नेपालमा पाइने जडिबुटीको अनुसन्धान गरी विभिन्न किसिमका रोगको औषधि पत्ता लगस्ई निधान पनि भइरहेको दाबी गर्दै यो कोरोनाको (अर्कबटी) नामक आयुर्बेदिक औषधि पत्ता लगसुंदै गर्दा सरकारद्वारा उपेक्षित गरिएको बताएका छन ।
हाल यस क्षेत्रमा उनको लगानी १५ लाख रुपैया भएको र औषधि विभागमा दर्ता प्रकृया शुरु पनि भएको बताउने डा. गौतमले हालसम्म रुपन्देही र भारतका केही स्थानमा गरि करिब १५० जनाले यो औषधि सेवन गरेका र निको पनि भएको ठोकुवा गरेका छन । भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा कार्यरत महिला कर्मचारीलेसमेत यो औषधि प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको बताएकी छिन । स्वाद थाह नपाउने, ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने, वान्ता आउने बिरामीले दस दिनसम्म दिनको दुइपटक दुई दुई गोलीका दरले खादा रोग निको भएर जाने बताएका छन । त्यस्तै लक्षण नदेखिएकाले पनि दिनको दुइपटक एक एक गोली खादा ठीक हुने बताउछन ।
यसरी जानकार व्यक्तिहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाल एउटा विभिन्न प्राकृतिक श्रोत र साधनले परिपूर्ण देश हो । धनी देशहरुले हाम्रो गरिवीको फाइदा उठाउंदै देशमा रहेका जडिबुटीहरु कौडीको भाउमा खरिद गर्छन र विभिन्न रोगको औषधी बनाएर हामिलाई नै महंगोमा किन्न बाध्य पार्छन । यो सबै हुनुको कारण बिज्ञानको अध्ययन गर्ने होनहार दक्ष र बिज्ञ युवाशक्ति विदेस पलायन हुने र राम्रो आम्दानी देखेपछि विदेश मोह जाग्ने, केही जागरीला युवाशक्ति खाडीमा, अलिकती जान्ने बुझ्ने भएका देशको प्रशासनिक सेवामा, अरु बांकी रहेका बेरोजगार । अनि कसरी हुने देश बिकास ?
तसर्थ, अनुसन्धान गर्ने ब्यक्तिहरुलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन मात्र होइन आर्थिक सहयोग गरी अरु थप अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्दछ । किनकी ठूला ठूला विकशित देशहरुको पेवा नै हो डब्लुएचओ । यस्ता गरिब देशका अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक हिसाबले माथी उक्लिन्छन भन्ने सोचाइले पनि अगाडि बढ्न दिदैनन । त्यसैले अनुसन्धान र उत्खननको क्रममा रहेका धेरै खनिज पदार्थ तथा जडिबुटीहरुको सक्दो प्रयोग नेपालमा नै गर्नुपर्दछ । यसको लागि बिदेसमा रहेका नेपाली दक्ष प्राविधीकहरुलाई सरकारले पनि स्वदेश बोलाई उनीहरुमा भएको सीप र जांगरको सहि सदुपयोग गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला ।
यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा प्रवल इच्छा शक्ति हुनुपर्यो । किनकी हाल उत्पादीत कोरोनाको औषधिलाई मान्यताको कडिमा सरकारले बांध्न मात्र सक्यो भने पनि सोच्नुहोस त देसको नाम अनि हाम्रो काम कहाँ पुग्छ ।
नबजात शिशुको हत्यामा संलग्न दुईजना पक्राउ
शरीर बन्धक बनाउने कार्यमा संलग्न पक्राउ